Maxaa ku soo kordhey qaraxa ka dhacay Magaalada Muqdisho – Radio Baidoa
Maxaa ku soo kordhey qaraxa ka dhacay Magaalada Muqdisho
Qaraxaan oo jugtiisa laga maqley degmooyin ka tirsan Gobolkan Banaadir ayaa waxaa uu ka dhacay Maqaayad ku taalla meel u dhow Isgoyska Sayidka ee Magaalada Muqdisho,waxaana la sheegay in qaraxa uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Dad ku sugan halka uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa ay sheegen in qaraxa uu ahaa Ruux isku soo xirey wayaabaha qaraxa uu galay Maqaayad ku dhow Baar Bulsho,halkaas oo ay inta badan fariistaan dad u badan Ciidanka Dowladda,isla markaana uu isku qarxiyey.
Wararka laga helayo qaraxa ayaa waxaa ay sheegayaan in uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo isugu Askar iyo dad Shacab ah,waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in dadka dhintey ay ku jirto Haweeney laheyd Maqaayadda.
Maqaayadda qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa ay aheyd mid dadka ay ka cunteeyaan,iyada oo sidoo kale ay laheyd goob ay dadka ku wada sheekeystaan,waxaana weli si rasmi ah loo cadeyn karin khasaaraha ka dhashay qaraxaas.
laamaha Amniga Soomaaliya weli wax faah faahin ah kama bixin qaraxa ismiidaaminta ah ee ka dhacay meel u dhow Isgoyska Sayidka ee Magaalada Muqdisho.